यस्ता कारणले बढ्छ रक्तचाप, नियन्त्रणका लागि यी खानेकुरा रोजौँ
साउन ३०, २०७४ सोमवार ११:४४:०० प्रकाशित
रक्तनलीहरुको भित्तामा रगतले प्रवाहको क्रममा दिने चापलाई नै रक्तचाप भनिन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा रक्तचाप कामको प्रकार र मानसिक उथलपुथल (दुःख, खुसी, डर, चिन्ता आदि) ले घटबढ भइरहेको हुन्छ। तर, धेरै लामो समयसम्म रक्तचाप १४०/९० एमएम/एचजी भन्दा माथि भइरहेमा त्यसलाई उच्च रक्तचाप भएको मानिन्छ।
उच्च रक्तचापलाई सधैँका लागि निदान गर्न सकिँदैन तर जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप नभएका तर बढ्दो उमेर (४५ नाघेका) र वंशाणुगत गुण बोकेका व्यक्तिले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ। बढ्दो उमेरसँगै धमनी बाक्लिँदै जाने हुँदा रगतको प्रवहाले धेरै चाप दिएर उच्च रक्तचाप हुन जान्छ। यसैगरि, गर्भवती अवस्थामा बढेको रक्तचापलाई भने चिकित्सक र डाइटिसियनको सल्लाह बमोजिम खानपान र औषधिको प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उच्च रक्तचापका कारणहरु यस्ता छन्:
उच्च कोलेस्टेरोल: उच्च कोलेस्टेरोल भएका व्यक्तिले कोलेस्टेरोल नियन्त्रणका लागि डाक्टरको सल्लाह बमोजिम आहार र औषधि खानुपर्छ र कोलेस्टेरोललाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ। तल उल्लेखित 'ड्यास' भोजन कोलेस्टेरोल नियन्त्रणको उद्देश्यले नबनाइएको भए पनि उक्त भोजनशैलीले कोलेस्टेरोललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
धूमपान र मध्यपान: धूमपान र मध्यपानले रक्तचाप बढाउनुका साथै अन्य रोगहरु (क्यान्सर, मुटुरोग, कलेजोको रोग आदि) लाई प्रोत्साहन गर्छ। तसर्थ स्वास्थ्य व्यक्तिका साथसाथै उच्च रक्तचापको जोखिममा रहेका व्यक्तिले धूमपान र मध्यपान सेवनमा नियन्त्रण ल्याउनु जरुरि छ।
चिनिरोगीः चिनीरोगीहरु धेरैलाई उच्च रक्तचाप देखापर्छ। चिनिरोगीहरुले आफ्नो रक्तचाप समय-समयमा जाँच गराउने तथा डाइटिसियनको सल्लाहमा आफ्नो तौल, उचाईलाई मध्यनजर गरेर सन्तुलित आहार खानुपर्छ।
मोटोपनाः मोटोपनाले रक्तचाप बढाउने भएकाले तौल नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। तौलसँगसँगै कम्मरको चौडाइमा कति परिवर्तन आएको छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ। महिलाको कम्मरको चौडाइ ३५ इन्चभन्दा धेरै र पुरुषको कम्मरको चौडाइ ४० इन्च भन्दा धेरै भएमा उच्च रक्तचापका साथै धेरै रोग लाग्ने सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन्। यसरी कम्मरको चौडाइ नाप्दा नाइँटोको वरिपरि नाप्नुपर्छ।
शारीरिक निस्क्रियताः हरेक स्वस्थ व्यक्तिले दिनको ३० मिनेट व्यायाम गर्ने अथवा हिँडडुल गर्नुपर्छ। उच्च रक्तचाप र कोलेस्टेरोल घटाउन भने दिनको ४० मिनट जति व्यायाम अथवा हिँडडुल उपयुक्त हुन्छ। यसरी व्यायाम गर्दा अथवा हिँड्दा कम्तिमा पनि लगातार १० देखि १५ मिनेट रोकिनु हुँदैन। मुटुको चाल बढ्ने गरि र पसिना आउने गरी व्यायाम गर्नुपर्छ।
यसका अलावा धेरै मानशिक तनाव लिने र अस्वस्थ्यकर खानपान अपनाउने मानिसहरु उच्च रक्तचापको जोखिममा हुन्छन्।
अरु ठूला रोगभन्दा सामान्य लागे पनि उच्च रक्तचापले कस्तो परिणाम दिन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। केही निश्चित लक्षणहरु नदेखाउने भएकाले यसलाई एक सुशुप्त ज्यानमारा (साइलेन्ट किलर) का रुपमा लिइन्छ। जसका कारण धेरैलाई उच्च रक्तचाप भएको थाहा पनि हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरु सधैँ मुटु रोग, मस्तिष्कघात, मिर्गौला रोग र अन्धोपनाको जोखिममा पर्न जान्छन्।
यसैगरी उच रक्तचापले थकान बढाउने, यौन क्षमतामा कमी ल्याउनुका साथै हात, खुट्टा, टाउको दुखाइ बढाउने गर्छ। त्यसैले स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाएर रक्तचापलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु जरुरी छ।
खानपानको माध्यमबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा रहेको एनआइएच नामको एक संस्थाले ड्यास (डिएएसएच) भोजनको अवधारणा ल्याएको थियो। यो भोजनमा प्रशोधन नगरिएको अन्न, कुखुराको मासु, माछा, नट्स (बदाम, काजु, किसमिस, ओखर आदि) गेडागुडी, न्युन चिल्लो भएका दुग्ध पदार्थ, सब्जी र फलफूल आदिलाई समावेश गरिएको हुन्छ। साथै, तेल/चिल्लो, रातो मासु, गुलियो र सफ्ट ड्रिंक्सजस्ता स्वस्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खानेकुरालाई भने एकदमै थोरै मात्रामा समावेश गरिएको हुन्छ। यस्तो भोजनले हाम्रो खानामा पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, प्रोटिन, एन्टिअक्सिडेन्ट र रेशायुक्त पोषक तत्वहरु दिन्छ। यसैगरी, संतृप्त चिल्लो पदार्थ, कोलेस्टेरोल र नुनलाई कटौती गर्छ जसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।
धेरै मानिसले नुनलाई कटौती गर्ने भन्नाले खानामा नुन नहाली खाने भनेर बुझ्छन्। तर, नुन भरपूर मात्रामा भएका खानेकुराहरु, जस्तैः जंक फुड तथा अजिना मोटो र सोयासस हालेर बनाएका बजारिया खानेकुरा भने प्रसस्त मात्रामा खाइरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी, गाउँघरतिर अचार, मासु तथा अन्य खानेकुराहरु लामो समयसम्म जोगाएर राख्न नुनको धेरै मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। यस्ता खानेकुरा पनि आफ्नो नियमित खानपानबाट हटाउनु जरुरी छ। नुनको सट्टामा स्वादका लागि अरु मसला (जस्तैः मरिच, ल्वांग, दालचिनी, अलैँची, प्याज, लसुन आदि) को प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक स्वस्थ व्यक्तिले एक दिनमा ५ ग्राम अर्थात् १ चियाचम्चा भन्दा धेरै नुन खानु हुँदैन भने रक्तचाप उच्च भएका व्यक्तिले ३ ग्रामभन्दा कम नुन खानुपर्छ। हामीले दैनिक खानेकुरामा प्राकृतिक रूपमै सोडियम (नुन बन्न चाहिने तत्व जसले रक्तचाप बढाउँछ) हुने भएकाले खानामा नुन प्रयोग गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ।
(भट्टराईले न्युट्रिसन एन्ड डाइटेटिक्समा बिएससी गरेकी हुन्)
१. स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी मुद्दामा भिएलएनका अध्यक्षविरुद्ध थुनछेक बयान सुरु
२. भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकारे कोहलीको फिटनेश च्यालेन्ज, फिट हुन के गर्छन्?(भिडियो)
३. निदान अस्पतालमा बाथ रोग सम्बन्धी नि:शुल्क शिविर, ४७ जना बाथ रोगी भेटिए
४. सेवा-सुविधा माग गर्दै जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीको ४८ घन्टे अल्टिमेटम
५. कहिले आउला नर्सिङ पेशाप्रति गौरव गर्ने क्षण ?
६. कसरी हुन्छ फोक्सोमा संक्रमण? कसरी बच्ने?
७. जटिल अवस्थाकी गर्भवतीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार, शल्यक्रियापछि जोगियो ज्यान
८. स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा सिंहलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी
९. चितवन मेडिकल कलेजले भित्र्यायो १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन
१०. प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन
२. राष्ट्रकवि घिमिरे अस्पतालबाट डिस्चार्ज, एक सातापछि पुन: अस्पताल जाने
४. मेडिसिटीमा प्रोष्टेट बायोप्सी अन्तरक्रिया